Antonio Rudiger Oo Go'aan Ka Gaaray Heshiiska Cusub Ee Chelsea
HomeWararka CiyaarahaAntonio Rudiger oo go’aan ka gaaray heshiiska cusub ee Chelsea
September 26, 2021 Wararka Ciyaaraha, Horyaalka Germalka, Horyaalka Ingiriiska, Suuqa kala iibsiga 0
Daafaca dhexe ee kooxda Chelsea Antonio Rudiger ayaa lagu soo waramayaa inuu iska diiday qandaraas cusub oo uu ku sii joogi lahaa Stamford Bridge, xilli uu ku dhow yahay dhamaadka heshiiskiisa Blues.
xidigaha reer Jarmal ayaa u arka heshiiskiisa London inuu dhacayo xagaaga, taasoo u saamaxeysa inuu kala hadlo heshiisyada hordhaca ah kooxaha kale bilowga bisha Janaayo.
Ka dib markii uu kula guuleystay Champions League kooxda Thomas Tuchel xilli ciyaareedkii hore, 28 jirkaan ayaa haatan la sheegay inuu doonayo inuu ka tago kooxda dhamaadka heshiiskiisa, isagoo doorbidaya inuu dib ugu laabto Germalka ama kooxaha kale ee yurub.
Sida laga soo xigtay Marca , wakiilada Rudiger ayaa durba wadahadalo la yeeshay kooxaha reer Yurub ee Bayern Munich iyo Real Madrid , iyadoo labaduba ay diyaarinayaan xirmooyin mushahar ah si ay u siiyaan ninka Jarmalka bisha Janaayo.
Rudiger ayaa ka soo muuqday daqiiqad kasta oo ka mid ah Blues illaa iyo xilli ciyaareedkan, isagoo si dhaqso leh ugu soo laabtay raalli ahaanshaha kadib markii la magacaabay Tuchel xilli ciyaareedkii hore, wuxuuna ciyaaray kulan kasta oo bug -bax ah oo ay ku guuleysteen Champions League.